Ndifuna ukucima iifoto kwiakhawunti yam ye-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndifuna ukucima iifoto kwiakhawunti yam ye-Instagram
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 361
I-Instagram, njengoko igama layo lisitsho, yinethiwekhi yentlalo eyilelwe ukuba yabelane ngamaxesha obomi bethu, ngeqonga layo, elalilungiselelwe la mathuba afakwe kwikhamera yeefowuni eziphathwayo, uninzi lwezi zinto iinkumbulo zihlala zivuya kakhulu kwaye sabelana nabo ngesi sizathu.
Kwezinye iimeko kwakhona ngaphandle kokwabelana ngala maxesha sabelana ngawo memes, olunye uhlobo yemifanekiso engaphaya kwekhosi ixesha kuba asisafuni ukuba abanye abantu abasilandelayo bababone, ngenxa yezizathu ezahluka-hlukeneyo okanye ngenxa yokuba siyadikwa ngabo.
Imigaqo yokususa imifanekiso:
Ngaphandle kwezixhobo ezininzi ozifumanayo kwi-intanethi ezinokukunika zona, apho zikuxelela khona ukuba zinokucima imifanekiso emininzi ngaxeshanye kwiprofayile yakho ye-Instagram, kufuneka sikuxelele ukuba ayonyani.
Inyani yile iinkqubo zokhuselo zesicelo azikuvumeli Ukwenza le nyathelo, ukuba siyayazi, kunokuba yingxaki, kodwa ekugqibeleni, inkqubo ifuna kuphela ukuqinisekisa ukuba uqinisekile ukuba uyayicima le mifanekiso, kwaye awuyicimi nayiphi na imifanekiso ngempazamo. Ke ulumke kakhulu ngeziapps okanye izixhobo ezikuxelela ukuba banokususa imifanekiso kwinyathelo elinye.
Inkqubo evela kwifowuni yakho ephathekayo usebenzisa i-IG:
Into yokuqala yokwenza kukuba ngena kuwe akhawunti ye-Instagram evela kwisicelo se-IG.
Nje ukuba ungene ngaphakathi indawo kwaye ukhethe ukhetho lokungena kwiprofayile yeakhawunti.
Eli nyathelo liza phambuka kwiwindow ephumayo, apho iimpapasho ozenzileyo kwiakhawunti yakho ziya kuboniswa.
Cofa kwi icon susaOku kuya kukubonisa amachaphaza amathathu (· · Saka), onokuwafumana kwikona ephezulu ngasekunene kwescreen seapp.
Xa eli candelo libonisiwe, khetha ukhetho kwi susa.
Inkqubo iyakukusa kwiwindows entsha pop-up apho kuya kufuneka ukhethe ukhetho lokucima kwakhona. Ukuqinisekiswa kwenkqubo.
Ngale ndlela uya kuphelisa umfanekiso weprofayile yakho ye-Instagram. Kuya kufuneka uyenze nganye yeefoto ofuna ukuzicima.
Inkqubo evela kwi-PC yakho usebenzisa i-emulator:
Into yokuqala kule meko yile ukukhutshwa kunye nokufakwa ngokuchanekileyo kwe-emulator kwi-PC yakho, khumbula ukuba kufuneka ihambelane nenkqubo yakho yokusebenza.
Ngena Ngokwesiqhelo kwiakhawunti yakho ye-Instagram evela kwi-emulator kwaye ulandele amanyathelo aboniswe yinkqubo ukuze ukwazi ukubeka uguqulelo lweselfowuni kwiscreen sePC yakho, i-emulator nganye ikunika imiyalelo ekufuneka uyilandele.
Kwaye emva koko kufuneka ulandele inkqubo ngokungathi uyenza kwifowuni yakho ephathekayo. Olu hlobo lwesixhobo luhlala lusebenza kakhulu ekuguqulweni kweenguqulelo zePC kwiinguqulelo zefowuni eziphathwayo.
Kwimeko Instagram Inguqulelo ye-PC ayikuniki imisebenzi efanayo nenguqulelo yefowuni ephathekayo, ke kuyafuneka ukuba usebenzise i-emulators.
1 Imigaqo yokususa imifanekiso:
2 Inkqubo evela kwifowuni yakho ephathekayo usebenzisa i-IG:
3 Inkqubo evela kwi-PC yakho usebenzisa i-emulator:
Ungayisebenzisa njani intengiso ye-Twitter evela kwi-Twitter?
Ndingazifumana njani iinkcukacha zePinterest?